सुरु भयो तिहार | eAdarsha.com
सुरु भयो तिहार
१. यस वर्षको तिहार पर्व विहीबार शुरु हुँदैछ । पाँच दिनसम्म मनाइने यो पर्व पहिलो दिन कार्तिक २७ गते यमदीपबाट प्रारम्भ हुन्छ । कार्तिक २७ गते काग तिहार परेको छ । आयूर्वेदका आचार्य धनवन्तरि जयन्ती र धनवेरस पर्व पनि यसैदिन रहेको छ । २९ गते विहान कुकुर तिहार र साँझ लक्ष्मीपूजा परेको छ ।
२. नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार कार्तिक ३० गते औंशीको तिथिमा गरिने स्नान र दान उपयुक्त छ । यसैदिन गाई, गोरु पूजा गरिन्छ । कार्तिक शुक्ल प्रतिपदामा आत्म (म्ह) पूजा पनि हुन्छ । मंसिर १ गते भाइटीका रहेको छ । यवर्ष नेपाल सम्वनतको नयाँ वर्ष सुरु पनि मंसिर १ गतेबाट नै हुँदैछ । नेवार समुदायमा केहीले भाइटीका २ गते मनाउने समाचार आएको छ ।
३. नेपालीहरुले मनाउने ठूला चाड मध्ये दशैपछि तिहार हो । तराई क्षेत्रमा तिहारलाई दशै भन्दा बढी मनाउने गरिन्छ । तिहारलाई प्रकाश पर्व पनि भनिन्छ । तिहारका पाँच दिन दीपावली गर्ने र धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा गर्ने चलन छ । तिहारमा फलफूल तथा मीठाईका परिकारहरुको बढी प्रयोग हुन्छ । यसैगरी तिहारलाई फूलको पर्वको रुपमा पनि लिइछ । मखमली, सयपत्री लगायत थरीथरीका फूलका माला लगाउने गरिन्छ ।
४. तिहारका अनेक उपमा छन्, यो भाईपूजा मात्र होइन, प्रकृतिको पूजा गर्ने पर्व पनि हो । कुकुर पूजा, काग पूजा, गाई पूजा हाम्रो परम्परागत सामाजिक जीवनसँग जोडिएको छ । अन्धारमा दीप जगाउनु प्रकाशको महत्व दर्शाउनु हो । यसवेला देउसी भैलो खेलेर मनोरञ्जन गर्ने मीठा परिकार खाने, दाजुभाई दिदीबहिनीहरु भेटघाट भई टीका लगाउने आदि कार्यले मानिसको जीवनलाई रमाइलो बनाएको महशुस हुन्छ ।
५. यो वर्ष कोरोना महामारीका बीच तिहार मनाउँदैछौं । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनु कदापी भुल्नु हुँदैन । भीडभाड गर्नु पनि हुँदैन । त्यसैले धेरै ठाउँमा देउसी भैलो खेल्न पनि प्रतिबन्ध छ । घर छाडेर टाढा जाँदा रोग सर्ने डर हुन्छ । सकेसम्म तिहारलाई पनि घर भित्रै सीमित गर्नु पर्दछ । दीपावलीमा सबैभन्दा बढी आगलागीको डर हुन्छ । तसर्थ होशियारी पनि अपनाउनु पर्दछ । चार्डपर्व मनाउनु राम्रो हो, तर आफ्नो अवस्था, समय, काल, परिस्थिति बुझेर काम गर्नु र स्वस्च्छ मनोरञ्जन गर्नु उपयूक्त हुन्छ ।